Andy Robertson Oo Kashifay Taatikada Jurgen Klopp U Qorsheeyey Inay Ku Xakameeyaan Lionel Messi – Latest Sports News
Andy Robertson Oo Kashifay Taatikada Jurgen Klopp U Qorsheeyey Inay Ku Xakameeyaan Lionel Messi
Liverpool ayaa habeen dambe garoonka Camp Nou marti ugu noqon doonta Barcelona, waxaana tababare Jurgen Klopp uu ciyaaryahannadiisa kasii dhaadhiciyey fahamka qaabka ugu fudud ee ay ku xakamayn karaan xiddiga reer Argentine ee Lionel Messi.
Difaaca bidix ee Liverpool, Andy Robertson ayaa warbaahinta u sheegay taatikada uu tababare Klopp u qorsheeyey inay iskaga xidhaan Messi oo haddii ay ka ilaashadaan shabaqooda, ay natiijo ka heli karaan lugta koowaad ee ay martida yihiin.
Mucjisada reer Argentine ee Messi ayaa waxa uu ku naaloonayaa xili ciyaareed aad ugu wanaagsan, iyadoo uu hoggaamiyo tartanka abaal-marinta Kabta dahabka ah ee gool-dhalinta Yurub.
Robertson oo waraysi siiyey barta internetka ee UEFA.COM ayaa waxa uu tibaaxay in kooxdiisu ay u diyaarsan tahay ciyaartan, ayna samaynayaaan qaabka ugu suurtogalsan ee ay iska ilaalin karayaan Messi.
“Ilama aha inay habboon tahay inaad ciyaar si ka duwan ciyaaraha kale iskugu diyaariso. Dabcan, waxaad la ciyaaraysaa laacib ka wanaagsan ciyaaryahannada kale ee aad la dheeli jiray… isagu waa ciyaartoyga ugu fiican caalamka. Waxaad daawan kartaa muuqaalladiisa haddii ay ku caawin karaan. Laakiin dhamaantayo waxaanu u baahanahay inaanu diyaarsanaano, sababtoo meel kasta oo garoonka ah ayuu ka yimaaddaa.” Ayuu yidhi Andy Robertson.
“Marka aad daawato, mararka qaarkood badhtamaha garoonka ayuu ku laabanayaa, kubadda ayuu kasoo qaadayaa oo hore usoo wadayaa, markaa wuxuu kusoo bilaaban doonaa dhinaca midigta, laakiin anigu waxaan isku diyaariyey inaan meeshaas ka eryo. Laakiin waxa kale oo aan ogahay inuu nagu soo carari doono mararka qaarkood, dhamaantayo ayaanay noo taallaa sidii aanu isku difaaci lahayn.”
Robertson waxa kale oo uu qiray in Barcelona ay haysato ciyaartooyo kale oo dhaawici kara Liverpool inta ay iska ilaalinayaan Lionel Messi, waxaanu tusaale usoo qaatay Coutinho iyo Suarez.